I-Thermostat Yasekhaya Yodidi
I-Thermostat Yasekhaya Yodidi I-Thermostat ye-Smartphone inika i-minimalist, uyilo oluhle, ngokuchasene noyilo lwendalo lwe-thermostat. Ityhubhu yokudlula isuka kumhlophe iye kumbala ngephanyazo. Into ekufuneka uyenzile kukusebenzisa enye yeefilimu ezi-5 ezinokutshintsha umbala ngasemva kwesixhobo. Ukuthamba kunye nokukhanya, umbala uzisa ubumbano obuthathaka bokwenyani. Ukudibana ngokwasemzimbeni kugcinwa kukuncinci. Ukuchukumisa okulula kuvumela ukutshintsha ubushushu ngelixa lonke olunye ulawulo lwenziwa kwi-smartphone yomsebenzisi. Isikrini esenziwe nge-inki ekhethiweyo ngenxa yomgangatho wayo ongenakuthelekiswa nanto kunye nokusetyenziswa kwamandla okuncinci.
Isibane Imithombo ekhanyayo yesi sibane esahlukileyo ibekwe embindini wesimo esipheleleyo, ngoko ikhanyisa umthombo othambileyo kunye nomthombo ofanayo. Indawo yokukhanya yahlulekile ukusuka kumzimba ophambili ngokulula ngokuma komzimba ngamalungu asezantsi kunye nokonga amandla ngokusetyenziswa kombane osezantsi kuyinika into eyongezelelweyo. Kwakhona umzimba onokuchukumisa wokujika isibane KUPHELA okanye uvaliwe yenye into yanamhlanje yokukhanya okhethekileyo. Ukubonakalisa kukhokelela kwiyantlukwano ekukhanyiseni kunye nesibane senziwe. Uninzi lokukhanya okuvela kwizibane ukuze umbukeli angasebenzisi ithuba lokukhanya. Kuhle ukuba uphile.
Ibhanki Yengulube Into ibhanki yehagu.Ubume obukhethekileyo obujongwe ngokudityaniswa obuxabisekileyo, obuxabisekileyo bokuhombisa bubonisa ukuthandeka kunye nobubele kunye nokusoloko ubukho bamalungu osapho, ukuxhasa ngengxowa-mali kuyasebenza kakhulu. Kodwa olona phawu lubalaseleyo kwi-DeePee - konke ukongeza kwimisebenzi esemgangathweni ihlangabezana ngokugqibeleleyo- ngaba amagama amatsha, ayingqayizivele kwaye ayimfuneko "
Isibane Esikhulayo Le projekethi iphakamisa ukuxhasa olu setyenziso lutsha olunikezela ngamava okuphembelela azeleyo. IBB Igadi encinci sisibane esikhulayo, esifuna ukubuyela kwindawo yezityalo ezinuka kamnandi ekhitshini. Yivolumu enemigca ecacileyo, njengeyona nto minimalist yenyani. Uyilo olucekeceke lufundelwe ngokukodwa ukulungelelanisa iimeko ezahlukeneyo zasendlini kwaye inike inqaku elikhethekileyo ekhitshini. BB Igadi encinci sisakhelo sezityalo, umgca wayo ococekileyo uyazikhulisa kwaye ungaphazamisi ukufunda.
Isithethi Esiphathwayo I-Thermostat Yasekhaya Yodidi Isibane Ibhanki Yengulube Ubambe Isitshixo Isibane Esikhulayo